I-GvSIG: Ukuqala kokuqala - ama-Geofumadas
I-GvSIG: Ukuqala kokuqala
Okwamanje nginguye "eboshiwe"ukungena ku-GvSIG, nangu umbono wami wokuqala.
Njengoba ngishicilele amakhasi we-371, ngiye ngakha ukuthi leli thuluzi lenzelwe abasebenzisi be-AutoCAD nabakwa-ArcView. Ukufana ne-ArcView kwangilindele ngokulula "buka, ithebula, imephu"kodwa nge-AutoCAD ingavali ngisho ... ukuqala ngamagama omumo webanga nokude usebenzisa isimboli @ isitayela ukuthi sonke safunda ngezinguqulo ze-R12 nokuthi nakuba zibhekwa njengezingasebenzi, ziyasebenza ekuhloleni izinhloso. Yiqiniso, ikhono lokwakhiwa lincane kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi cishe lanele.
Lokhu kufanele sifunde ezininginingi, nge isendleleni sezimiso ka "engasafuni ibukeke ArcView" uma akukubi ne handling wakhe izakhiwo esingezansi bese lateral ukuze nomlenze wesokunene; ekugcineni kunomkhawulo kumqondo wokufundisa othiwa "ukufunda ngokuhlanganyela" ... kodwa ungabatshele ukuthi impendulo yabo ifana:
"... umklamo wokwakha osetshenziswe ngamathuluzi amanye awusasebenzi ..."
I-Microstation isivele ishiye eceleni leyo nto yokuzijabulisa eyenza ukuthi ingafuni ukubonakala njenge-AutoCAD, kodwa igcina isitayela sayo akuyona into engalungile ukwenza imishayo njengabasebenzisi bewindi. Nakuba kwakunesikhathi eside esidlule ukuthi kwakudingeka ukuthi afake amagama e-nomenclature asebenzayo kakhulu ekungeneni kwamabherethi namabanga kuya kwisitayela se-AutoCAD ku-keyin yakhe ... ukunikeza isibonelo.
Ngokuqinisekile ukufakwa kuyimangalisa, akukho lutho oludingekayo ... kuba yiJava umbuzo kuphela uma ufuna ukufaka umshini ozobonakalayo ofanelekayo ukuze inguqulo ifakwe.
Yebo, kuthatha isikhathi salo kodwa ngaphandle kwezithiyo. Once efakwe ilungele ukusetshenziswa ... umbuzo omuhle, ingabe ingafakwa ngaphandle kwe-intanethi ene-JVM ilungile?
Nakuba akuyona isitayela engingathanda ukuyikhetha, lapho a incwadi esheshayo uhlanganisa izahluko ezimbili zokuqala bese kuthi konke okunye ukwandise ukusebenza kwezinto ezilandelayo ... lokho okushiwo yilo mbhalo futhi ikakhulukazi eSpanishi akukubi.
Lapho ebuzwa ukuthi kungani ungenziwanga incwadi esisemthethweni ezininginingi lithe usizo inthanethi kwakuyindlela engcono kakhulu ukugcina zonke izinguquko, lapho akugwema kokuba ukwandisa $ 25 ilayisense ngayinye ku ibhukwana ezinyatheliswayo efika ibhokisi lemeyili lase lidlulile isikhathi eside ... kufushane, ngubani owakhipha ngaphandle kwesihloko sabo ... akukubi ukuba nenkani kodwa J $$% & # lin uma sonke sithinte tholwa phansi ekwenzeni izincwadi zethuluzi ngalinye okufanele liqaliswe.
Ukuba nethuluzi elihle lihle kakhulu, Okubonakalayo, kodwa ukwesekwa kwalo ku-caveman kuyisiqephu esithathwe izinwele ... kusho ukuthi izinkundla zikhona. Ngiyethemba geofumados lolu hlelo lokusebenza ukuthi ngiyayithanda khumbula ukuthi sisengabangane "amakhasimende" futhi "ikhasimende ababekhokhela ilayisensi yakhe," awukwazi ukutshela ironies like "sicela musa ukuchitha amathokheni yakho yokusekela ... asilindele beze lapha imibuzo efundwayo ... "ah, ngikhohliwe ukuthi abakhulumi iSpain ngakho-ke anginqobi ngokugqoka izingubo zami kulabo abalaleli abakhethiwe.
Ngamafuphi, ngicabanga ukuthi i-Manifold ingenye yezixazululo zesofthiwe ze-GIS ezithengisa kakhulu, ngentengo engahle ... uma ngingu-Oracle ngizoyithenga.
... futhi ngiyathanda i-gvSIG, sizobona ukuthi uthando luhlala isikhathi eside kangakanani.
Thumela Previous«Langaphambilini Uhlelo lwe-GvSIG - ake ake ...
Post Next I-GvSIG vrs. Okufakiwe, amafomu wokufakaOlandelayo "
Impendulo eyodwa ku- "GvSIG: Ukuqala kokuqala"
Embuzweni Ungawafaka ngaphandle kwe-Inthanethi ene-JVM ilungile?
Pureba ukulanda inguqulo ephathekayo
Futhi ungakwazi ukuthwala i-GvSIG kusihluthulelo sokukhiya noma ngabe ukuphi ngaphandle kokukhathazeka kwe-JVM noma izinhlelo zokuSebenza. Ulwazi olungaphezulu